Ireo fitoeran-drano lehibe any Espana | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | angovo hydraulic, Angovo azo havaozina
Talohan'izay isika dia niresaka momba ny angovo avy amin'ny herinaratra ao Espana, ary ny fomba fitaoman ao amin'ny «mix mix énergie», afaka mahita ny lahatsoratra ianao amin'ny fikitihana HERE.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fitahirizana lehibe indrindra an'ny firenena, manomboka amin'ny afovoan'i Aldeadávila, ary miafara amin'ny Entany Gento.
1 Zavamaniry hydroélectric Aldeadávila
3 Villarino Afovoany
Zavamaniry hydroélectric Aldeadávila
Ny tohodranon'i Aldeadávila sy tohodrano, fantatra ihany koa amin'ny riandranon'i Aldeadávila. Izy io dia asa pharaonic namboarina manamorona ny Reniranon'i Douro, 7 km miala ny tanànan'i Aldeadávila de la Ribera, miorina ao amin'ny faritanin'i Salamanca (Castilla y León) ary mandrafitra ny iray amin'ireo asa lehibe momba ny famokarana herinaratra elektrika ao Espana momba ny famokarana herinaratra napetraka sy famokarana herinaratra.
Aldeadávila, tantanan'i Iberdrola, dia manana orinasa mpamokatra herinaratra roa. Aldeadávila I, nanomboka tamin'ny 1962 ary Aldeadávila II, nanomboka tamin'ny 1986. Ny voalohany dia nametraka 810 MW raha ny faharoa kosa 433 MW, izay manao mitotaly 1.243 MW. Ny famokarana antonony dia 2.400 GWh isan-taona.
Any Extremadura, Iberdrola dia manana iray amin'ireo zavamaniry mpamokatra herinaratra lehibe indrindra ao aminy, dia ny an'i José María de Oriol, fantatra koa amin'ny anarana hoe Alcántara, izay manana kapila 916 megawatts (MW). Ny fahaizany dia sahabo ho eo indroa ny herinaratra izay omen'ny orinasa an'ity vondrom-piarahamonina mizaka tena ity amin'ny fotoana fanjifana faran'izay betsaka.
Any amin'ny tanànan'ny Caceres any Alcántara no misy azy, misy vondrona mpamokatra herinaratra efatra manana herinaratra 229 MW izay nanomboka teo anelanelan'ny 1969 sy 1970. Ny sombin-javatra mavesatra indrindra ny fametrahana dia ny rotor an'ny mpanamboatra tsirairay milanja 600 taonina.
Ny fitahirizana afovoany no lehibe indrindra faharoa ao Espana ary ny fahefatra any Eropa. Manana habe 3.162 hectometres toratelo (Hm3) lehibe indrindra ary manana ny tohodrano 130 metatra ny haavony, 570 metatra ny halavan'ny volon-trondro sy vavahady mihosinkosina 7 miaraka amin'ny 12.500 m3 / s farafahakeliny izay miasa toy ny tatatra rehefa ilaina.
Mandritra ny ony Tormes dia ahitantsika ny fitahirizana sy ny Tohodrano. Any amin'ny 5 km miala ny tanànan'i Salamanca any Almendra ary 7 km miala ny tanànan'i Zamora any Cibanal, ao Castilla y León. Izy io dia ao anatin'ny rafitra Saltos del Duero miaraka amin'ireo fotodrafitrasa napetraka ao Aldeadávila, Castro, Ricobayo, Saucelle ary Villalcampo.
Ny zavamaniry hydroelectric dia tena miavaka ary mandany fahakingan-tsaina fatratra. Amin'ny tranga Almendra-Villarino, ny turbine dia tsy eo am-pototry ny tohodrano, izay mety haavon'ny 202 m; Raha ny tokony ho izy dia manana fidirana rano saika amin'ny ambaratonga ambany izy io ary io dia mamakivaky tionelina iray nolavahana tao amin'ny vatolampy 7,5 m ny savaivony ary 15.000 m ny halavany ary miafara any amin'ny fitahirizan-drano Aldeadávila, ao amin'ny Reniranon'i Duero. Amin'izany dia azo atao ny mahazo haavo 410 m, miaraka amin'ny velaran-drano fitehirizana 8.650 XNUMX ha fotsiny. Ankoatr'izay, ny vondrona turbine-alternator dia azo ovaina ary afaka miasa toy ny paompy maotera.
Ny herinaratra napetraka amin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra dia 857 MW ary manana famokarana antonony 1.376 GWh isan-taona.
Ilay orinasa Iberdrola hydroelectric izay misy ao Cortes de Pallás (Valencia) dia ilay tobim-paompy lehibe indrindra any Eropa kontinanta . Any amin'ny reniranon'i Júcar no misy azy, ary noho ny fanendrena vondrona efatra azo ovaina napetraka tao amin'ny zohy mba hanararaotana ny fahasamihafana 500 metatra eo amin'ny haavon'ny la Muela sy ny fitahirizan-tany Cortes de Pallás, nanitatra ny 630 MW ny zavamaniry ny herinaratra hatrany amin'ny 1.750 MW amin'ny turbination ary 1.280 MW amin'ny pumping.
Ilay zavamaniry dia afaka mamokatra 1.625 GWh ary mamaly ny fangatahana isan-taona efa ho 400.000 trano
Ny reservoir, ny tobin-herinaratra ary ny tohodrano Saucelle, fantatra ihany koa amin'ny riandrano Saucelle, dia asan'ny injeniera mpamokatra herinaratra natsangana teo afovoan'ny ony Duero. 8 km miala ny tanànan'i Saucelle, any amin'ny faritanin'i Salamanca no misy azy. Ilay fizarana misy azy dia fantatra amin'ny anarana hoe Arribe del Duero, fahaketrahana lalina ara-jeografika izay mametraka ny sisin-tany manasaraka an'i Espana sy Portugal.
Izy io dia ao anatin'ny rafitra Saltos del Duero miaraka amin'ireo fotodrafitrasa napetraka ao Aldeadávila, Almendra, Castro, Ricobayo ary Villalcampo. Saucelle dia manana zavamaniry hydroelectric roa. Saucelle I dia natsangana teo anelanelan'ny 1950 sy 1956, ny taona niasa, ary manana herinaratra 251 megawatts ary manana Turbine 4 Francis. Niasa tamin'ny taona 1989 i Saucelle II ary manana turbine 2 Francis ary manana kapila 269 MW, ho an'ny totalin'ny 520 MW.
Ny zava-maniry Estany-Gento Sallente dia karazana azo ahodina ary nanomboka niasa izy io tamin'ny taona 1985. Niorina tamin'ny renirano Flamisell io zava-maniry io rehefa namakivaky ny tanànan'ny La Torre de Cabdella. Izy io dia manana fampiasa 468 MW ary, toy ny saika ny zavamaniry Endesa rehetra dia manana turbine 4 Francis izy. Ny riandrano dia 400,7 metatra ny halavany.
Ny zavamaniry, napetraka eo anelanelan'ny farihy roa (Estany Gento, amin'ny haavon'ny 2.140 metatra; ary Sallente, amin'ny 1.765 metatra), dia miasa ao amin'ny azo ahodina tanteraka: amin'ny fotoana tampony (miaraka amin'ny fangatahana faran'izay betsaka) dia mamokatra angovo elektrika amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny riandrano efa ho efa-jato metatra tsy fitoviana. Amin'ny ora lohasaha (fanjifana faran'izay kely indrindra) ny turbine mitovy ihany no mantsaka ny rano avy amin'ny farihy ambany mankany amin'ilay ambony, mitahiry angovo mety hitrandrahana mandritra ny fotoana takian'ny be indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » angovo hydraulic » Ireo faritany goavambe any Espana
Tahaka ny inona ireo lolo 200 XNUMX taona lasa izay?